Halyeey hore ee kooxda Barcelona ah oo ka hadlay xalka dhibaatooyinka Real Madrid – Gool FM
Halyeey hore ee kooxda Barcelona ah oo ka hadlay xalka dhibaatooyinka Real Madrid
Dajiye August 1, 2019
(Madrid) 01 Agoosto 2019. Hayeeyga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ee Rivaldo ayaa ka hadlay xaalada kooxda Real Madrid uu hogaaminayo Zinedine Zidane, kahor bilaabashada xili ciyaareedka cusub.
Rivaldo ayaa qeexay xalka dhibaatooyinka haatan hesata kooxda Real Madrid iyo natiijooyinka xun ay la kulantay inta lagu gudi jiray kulamada diyaargarowga kahor xilli ciyaareedka cusub.
Hayeeyga reer Brazil ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waa xaqiiqo ah in xiligan xaalada aysan ugu soconin sida ugu fiican kooxda Real Madrid, waxay sameeyeen heshiisyo badan, waxayna hada doonayaan inay natiijooyin gaaraan”.
“Ha hilmaamin in qof walba uu haatan ka hadlayo xumaanta khadka dhexe ee kooxda Real Madid, laakiin waxay imaaneysaa taasi iyadoo ay jirto maqnaanshiyaha xiddiga reer Brazil Casemiro, kaasoo muhiim u ah Zidane”.
Intaas kaddib Rivaldo ayaa wuxuu ka hadlay xalka ugu haboon ee lagu hagaajin karo dhibaatooyinka Real Madrid wuxuuna yiri:
“Haa Real Madrid waxay sameyn kartaa heshiisyada Pogba ama Christian Eriksen, iyagu waa ciyaartoy karti sare leh”.
Kaalintee ayuu Nicolas Pepe ka galay xiddigaha Afrikaanka ah ugu qaalisan Taariikhda ama lacagaha ugu badan lagula wareegay?